प्लेब्वाई : कथा
‘क्या बोर गर्छे भन्या क्या, कम से कम ब्रा त लगाउनुपर्छ नि! लाज घिन केही पनि मान्दिन। मान्छेलाई यहाँ कत्रो चिन्ता छ। तँ भने छाती उदाङ्गो पारेर बोर गर्छेस्।’ उसले यसो भनेपछि मेरो कान ठाडो...
तिमीलाई रुवाउन यो चिठी लेखेकी होइन । प्यारी छोरी धरती, भर्खरै काममा छिरे। हिउँदको चिसो साँझ। वाहिर हिऊ परिरहेको छ। हावाको गसिसँगै हिऊ परपरसम्म उडिरहेको छ। परिरहेको हिऊ सुन्दर...
कथा: हिराको हार
उनी निकै सुन्दर, आकर्षक र सुशील युवती थिइन् । तर एउटा सामान्य कर्मचारीको घरमा उनी जन्मनु नियतीको प्रहार नै मान्नुपर्थ्यो ! दाइजो लैजाने क्षमता उनीसँग थिएन, कुनै महत्त्वाकांक्षा थिएनन्, नाम...